Dargaggoonni maaliif kondomiitti hin fayyadaman? - BBC News Afaan Oromoo
Nataashaa Pireskii 'BBC Three' irraa
Heeyleey* jaalallee ishee waliin erga gargar baatee booda galgala sana gurbaa yeroo mana barumsaa sadarkaa lammataa turte beektu tokko waliin tasa walitti baate.
Aaron* humna waraanaatti makamee waan tureef yeroo dheeraaf wal hin agarre ture. Kanaaf battaluma wal argan haasa'uu eegalani. Waliin waarisiifatani wal fudhatani galan.
"Akkan xiqqoo jarjare naaf gala garuu gurbaa kana mana barumsa sadarkaa lammataa irraa kaaseen beeka" jetti shamarreen ganna 24 kun.
"Xiqqoo machaa'uus hin oolle, gurbichas waanan beekuuf kondomii fayyadamuun hagas mara barbaachisaa natti hin fakkaanne ture.
Gaafan dhibee gogaa dhaqna namaa irratti mul'atu 'Chlamydia' ofirratti arguun akkan dogoggore naaf gale" jetti.
Erga dhibee saal-qunnamtiin daddarbu kana ofirratti argitee booda waa'ee of-eeggannoo gochuu kan yaaduu eegalte.
"Baay'ee ofitti aaree of arrabsaan ture" jetti. Gurbaan mallattoo dhibee kana dursee ofirratti argee akka ture gaafa dhageessu ammoo aariin ishii gara nama amanu dhiisuutti guddachuu himti.
Sanaan dura Heeyleey wayita qunnamtii saalaa raawwattu kiniinii dahumsa dhorku ni fudhatti garuu kondomii kan fayyadamte yeroo qubaan lakkaa'amudha.
Sababni isaa akka isheen jettutti 'itti hin tolu', ammoo waa'ee kondomii dubbachuun jibbisiisaa akka ta'e yaaddi,
"Yeroos yoon waa'ee kondomii fayyadamuu dubbadhe akka gowwaatti na fudhatu jedheen yaada ture.
Waa'ee dhibee saal-qunnamtiin daddarbanii nan yaadda'an ture garuu haa fayyadamnu jedhee dubbachuuf ofitti amanamummaan dhaba - keessa koo fedhii dhiirota gammachiisuutu jira."
Dhukkubooti saal-qunnamtiin daddarban dhala godhachuu irratti dhiibbaa irraan gahuu akka danda'u gaaf bartu akka dammaqxe himti. "Akka kanatti yaadee hin beeku ture.
Gaaf kondomii fayyadamuu dhiistu nama tokko akka malee amanaa jirta jechuudha, kanamoo gochuu hin qabdu."
Saal-qunnamtii of-eeggannoon guutame gochuu dhabuun kufaatii Heeyleey qofa miti.
Namoonni hedduun akkaataa itti kondomii hidhatanillee muuziitti kondomii kaa'uun manneen barnootaa keessatti kan agarsiifamuun alatti barnoota waa'ee saal-qunnamtii gahaa ta'e hin argatani.
Qorannoon UK keessatti taasifame tokko akka mul'isutti dargaggooti umurii 16-24 nama haaraa waliin wayita saal-qunnamtii raawwatan kondomii hin hidhatani.
Dargaggoota umurii wal fakkaataa keessa jiran 10 keessa tokko ammoo cirumaa kondomii fayyadamanii hin beekani jedha qorannoon kun.
Kondomii fayyadamuu dhabuun ammoo infeekshiniiwwan saal-qunnamtiin daddarban yeroo dheeraa keessa miidhaa namarraan gahuu danda'an kan akka salphaatti ofirratti arguun hin danda'mneef nama saaxiluu danda'a.
Warri Biriitish 'quunnamtii saalaatiin' dadhaboodha jedhame
Rakkoo akkasii hambisuuf jecha biyyoonni hedduun dargaggoonni kondomii bilisaan akka argatan taasisaniiru.
Haa ta'u malee bakka kondomiin bilisaan argamuttillee dargaggoonni itti hin fayyadamani. Maaliif?
Sababni tokko maloonni biroo ittiin dahumsa to'achuun danda'amu akka kiniinii, lilmoo waraannatan akkasumas kan qaama ofii keessa awwaalchisan heddummachuu isaati.
Faallaa kondomii malootni kunneen yeroo yeroon yaadatanii bituu fi fayyadamuu hin barbaachisani.
Sababni biraa kondomiin erga yeroo duraaf bara 1950 keessa kalaqamee booda haala mijaataa ta'een yeroo yeroon dizaayiniin fooyya'ee dhiyaachuu dhabuu isaati.
Kondommiin yeroo duraaf kan tolfame mar'umaan horii irraa akka ta;e himu ogeeyyiin. Yero duraaf pilaastikii irraa kan tolfame ammoo walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa akka ta'e himama.
Yeroos kondomiin mataa qaama saalaa dhiiraa akka uwwisu qofaaf ture kan tolfame. Waggoota kurnan booda akka guutummaasaa uwwisutti kan fooyyeffame.
Haa ta'u malee kondomiiwwan haphii ta'an miira sirrii namaaf kennan hanga jalqaba jaarraa 20ffaatti hin tolfamne ture.
Yeroo ammaa kana kondomiin haalaa adda addaan dhiyaatullee dizaayiniin isaa kan jalqaba bara 1957 hojjetamerraa badaa hin fooyyofne.
"Yeroo jalqabaa umuriin koo saal-qunnamtiif gahu oduun waa'ee HIV baay'ee ho'aa ture" jedha Samu'eel*.
Dargaggeessi ganna 27 kun sodaa fi loogii sababa vaayirasii kanaatiin namarra gahaa ture ture sirriitti yaadata.
"Kanaf jecha yeroos [waggaa kurnan dura] yeroon saal-qunnamtii raawwadhu kan ammaa caalaa of-eeggannaa guddaa waliin ture kanan kondomiitti fayyadamu" jedha.
Miidiyaa irratti waa'een HIV akka duraa dubbatamuu dhabuun, ammoo talaalliiwwan vaayirasii HIV ittisan kalaqamuufi tamsa'inni isaa hir'achaa dhufuun sababoota namni kondomii fayyadamuu dhiisaa dhufeef keessa tokko ta'uu danda'a jedha.
Qorichoonni akka HIV nama hin qabne dursanii fudhataman PrEP (pre-exposure prophylaxis) jedhaman kalaqamuunis qooda guddaa qabu.
Qorichoonni kunneen yeroo dheeraa keessatti fayyaa namaa irratti dhiibbaan qaqqabsiisan adda bahuu baatullee itti fayyadamni kondomii daran akka hir'atu sababa ta'aniiru jedha qorannoon.
"Dhukkuboonni kaan yaalamuus kan danda'an waan ta'eef akka HIV sodaachisoo miti" jedha Samu'eel*.
"Yeroon naman sirriitti hin beekne tokko waliin kondomii malee saal-qunnamtii raawwadhu miira badaatu natti dhagaahama garuu ammoo battalumattin irraanfadha. Achii booda gaafan yaadadhu nan sodaadha" jedha.
Namni tokko yeroo saal-qunnamtii raawwatu sodaa dahumsa hin barbaadamne fi dhukkuboota daddarbanii qaba yoo ta'e fedhiin saal-qunnamtii isaa ni miidhama, keessuma kan dubartootaa akka qorannoon Ameerikaa tokko jedhamutti.
Sababa kondomii fayyadamuu dhabuun dhukkuba saal-qunnamtiin qabamtee akka turte kan dubbattu shamarreen ganna 24 Looraan, ergasii sodaa guddaa akka qabdu himti.
"Sodaan sammuukee keessa jira yoo ta'e waan hedduu balleessa" jetti.
"Kondomiin anaaf haara galfi guddaadha. Namoonni kondomii fayyadamuu hin feene yeroo mara warra yaada qajeelaa qaban miti jedheen yaada."
Namoota tokko tokkoof garuu fedhiin kondomii fayyadamuu dhabuu gahumsa saal-qunnamtii isaanii waliin wal qabata.
Dargaggeessi ganna 26 Joosh*, saal-qunnamtii erga eegalee kaasee waggoota saddetiif takkaa kondomiitti fayyadamee hin beeku.
Kondomii kan jibbeef yeroo duraaf jaalallee isaa ishee jalqabaa waliin saal-qunnamtii raawwachuuf wayita jedhu qaamni saalaa isaa ka'uufii dide. Kuni kan ta'eef sababa kondomii hidhateefi jedhee yaada.
Ergasii booda sodaa sana waan qabuuf kondomii fayyadamuu akka dhiise dubbata.
Wayita kondomii hidhatan kan qaamni saalaa ka'uufi didu Joosh qofa akka hin taane pirofeesarri fayyaa saal-qunnamtii fi wal hormaataa yuunivarsitii Sawuzhaampitan Siintiyaa Giraahaam ni dubbatti.
Kondomii fayyadamuu waliin walqabatee qaamni saalaa ka'uu dhabuun 'waan hin baratamne' miti jetti.
Sababni qaamni saalaa ka'uu diduuf tarii narvii waliin wal qabachuu mala. Yookan ammoo kondomiin bal'achuu ykn garmalee dhiphachuu ta'uu danda'a jetti ogeettiin kun.
Xiin-sammuu waliin wal qabachuu akka danda'us ni himti.
Dhimma kanarratto kan qoratte pirofeesar Giraaham akka jettutti namoonni rakkoon akkasii isaan mudatu gosa kondomii isaaniif mijatu filachuu qabu jetti.
Kondomiiwwan guddinnii fi lallaafinni isaanii wal caalu jiraachu namoonni hedduun quba hin qaban jetti.
Namoonni tokko tokko keessumaa dubartoonni kondomiin akka itti hin tolleefi darbe darbees akka isaan dhukkubsu kan jettu pirofeesar Giraaham kun sababa kondomiin goguutiin ta'uu danda'a jetti.
Yeroo akkasii dibata dabalataa kondomii laaffisu fayyadamuun barbaachisaa ta'uu himti.
Komiin biraa namoonni kondomii irratti dhiyeessan kan pirofeesar Giraaham mudate kondomiin miira saal-qunnamtii hir'isuudha. Kunis kondomii gosa gara garaa yaaluu dhabuurraa madda jetti ogeettiin kun.
Bara 2019 kana keessallee shamarran sababa loogii irra gahuun kondomii bitachuuf ija jabina hin qabani.
"Dhiironni hamma shamarranii waan dhiphatan natti hin fakkaatu" jetti Heeyleey.
"Suuqii keessa waanan hojjedhuuf nan arga, yeroo baay'ee kondomiin kan bitamu dhiirotaan qofa. Dubartoonni gadi bahanii bitachuuf ofitti amanamummaa hin qabani."
Akka pirofeesar Giraaham jettutti shamarran tokko tokko 'kondomii malee jedhanii yoo didan' jaalallee isaanii dhabuu akka danda'an sodaatu.
Keessaahuu kanneen "ofitti amanamummaa hin qabne, jireenyatti gammadoo hin taanee fi waa'ee bareedina qaama isaanii shakkii qaban kanaf saaxilamoodha" jetti.
"Shamarran akkasii jaalalleewwan isaanii 'saal-qunnamtii gaarii' akka waliin qaban akka itti dhagaa'amu waa'ee kondomii fayyadamuu hin kaasani."
Ofii, namni kondomiitti akka fayyadamu maal gochuutu danda'ama?
Gaaffii armaan olii namoota deebisuu yaalan keessaa tokko intarpiruunara Ameerikaa Isteesii Chiin. Kaampaniin ishee kondomii jala jalaan of laaffisu, kan namoota saal-qunnamtii of-eeggannoo qabuuf jajjabeessu kalaqeera.
Kondomiin kun reef yaaliirra kan jiru yoo ta'u abbaa taayitaa Bulchiinsa Nyaataa fi Qorichaa Ameerikaatiin mirkaneeffamuu qaba.
Dizaayiniin kondomii ammaaf wayyaa'ee hojjetame kan gabaarra jiru kan kaampaniin biyya Siwiidin tokko hojjete yoo ta'u, baay'ee haphii kan ta'eefi meeshaa ho'a qaamaa of keessa dabarsuu danda'urraa kan hojjetamedha.
Haa ta'u malee kunis hamma barbaadamu hin argamu. kan bitamuu danda'us intarneetii irraa qofa.
Intarpiruunarri Biritish Maayik Hoor ammoo kondomii hidhachuuf salphaa ta'e kalaqeera. Kondomiin inni kalaqe waan tuqamee banamu kan qabuufi osoo kondomichas ta'e qaama saalaa harkaan hin tuqiin hidhachuun ni danda'ama.
Image copyright Mike Hore
Kondomiin kun keessumaayyuu wayita namoonni machaa'an ykn waanta sammuu nama hadoochu fudhatan salphaatti hidhachuuf danda'anidha jedha Maayik. Kunis gabaaf hin dhiyaanne.
Kun kanaan osoo jiruu ilaalcha waa'ee saal-qunnamtii of-eeggannoo qabuu fooyyessuuf maaltu godhamuu qaba?
Barnooti saal-qunnamtii akkamiin waa'ee kanaa haasa'uun akka danda'amuufi hubannoo waa'ee fayyaa saal-qunnamtii foyyeessuuf ni gargaara.
Barnooti wayita ammaa iddoo hedduutti kennamu akkamiin kondomii akka hidhatan qofadha. Innuu erga saal-qunnamtii eegalanii booda turee kennama jechuun komatu dargaggoonni.
Rakkoon biraa namni waa'ee saal-qunnamtii ifatti dubbachuuf saalfachuudha. Kanaafis namni tokko xiqqummaa irraa eegalee haasa'uu qaba.
Akka Heeyleey* jettutti ijoolleen xiqqummaa irraa kaasanii waa'ee saal-qunnamtii haasa'uu hin eegalan yoo ta'e, carraan erga guddatanii haasa'uuf ija jabina qabaachuu isaanii xiqqaadha.
Barnooti saal-qunnamtii bal'ina qabu manneen barnootaa keessatti akka kennamu gochuufi maatii keessatti dhimmi kun ifatti akka haasa'amu gochuudhaan mootummaa fi maatiin gahee guddaa qabu jedhu ogeeyyiin.